Dingana tsotra Alohan'ny hividianana ny Tany ao Filipina (Philippines) - Ny mpisolovava ny Philippines! Filipiana mpisolovava, an-tserasera rehetra.
Dingana tsotra Alohan'ny hividianana ny Tany ao Filipina (Philippines)
Ny antso dun, FANADIHADIANA HAJIA
Mba hisorohana ny olana amin'ny ho avy ny vidin-tany eto any Filipina (Philippines), eto dia ny DINGANA TSOTRA izay tsy maintsy atao mialoha ny hividy ny tany: indrindra fa raha mbola tsy tonga aho mpandraharaha (real estate agent) na koa raha toa ny tompon-tany, ary hoy pinagbibili izy TANY aminy, Tokony hahita izanyTsy maintsy madio. Satria yang mitovy tanteraka fa tokony ho marina-marina misy eo amin'ny dika mitovy amin'ny Firaketana ny Asa. Izy ireo no tsy mitovy. Ka dia ho fantatrao raha FAUX, ny ENTA-mavesatra, na toy izany ny OLANA amin ny tany. Ny famoahana ihany koa eexecute anao ny FIHETSIKA FIVAROTANA na 'Fifanarahana ny Dealerships', nanao sonia nyong roa, rehefa mitondra ary koa, raha ny mpividy sy ny inonotarized yon. Ao anatin'ny iray volana avy notarization, mandoa vola ny voalohany ny sarany.
Tokony ho talohan'ny faran'ny volana ny loharanom-baovao, Ary ny BIR mba iissue rehefa TARATASY fanamarinana NY FAHEFANA MBA HISORATRA anarana, ny fanamarinana ny filazana ny fisoratana Anarana ny Asa saran'ny fa izay rehetra mikasika ny hetra sy afaka mihetsika ny anaran ny anaram-boninahitra fa tsy mba hividy.
Vao nahita fa ie (TARATASY fanamarinana NY FAHEFANA MBA HISORATRA anarana), dia mety hitondra amin'ny tsy nanaovany ny fisoratana Anarana ny Asa, fa ny dingana farany. Milaza ny Register ny Asa, eto izany dia ny farany sarany, Famindrana Saram. Ny saran'ny fa yon, tsy dia lafo loatra fa, misy mandeha aho, dia ho efa izay ny Firaketana ny Asa rehetra. Isusurender fa ny TOMPONY' ny DIKA mitovy ny anaram-boninahitra sy miandry anao izy. Satria na dia any amin'ny fisoratana Anarana ny Asa, tena lasa izay. Ahoana no tsy misy fa ny tompony ny tany sy ny fiainana izay ihany no sisa zaza.
Ary ny iray dia ny lahy amin'ny mpiray tampo aminy dia maty ihany koa.
Tsara ny andro-po. Anontanio hoe lang po ahy, misy ihany koa ny bibinta tsy tena olona ny amin ny tany atao tsy misy saina anaram-boninahitra na declarasyon safe to buy papo isika. Hi tsara ny andro-po. Manana fanontaniana lang po aho.
miaraka amidy aho dia be x toradroa.
Ny fanontaniana efa roa dw izy ireo mitana ny anaram-boninahitra izay tsy eo ny iray mandoa vola aho. Inona no ataoko. Tiako ho fantatra hoe inona no mateza isika fa taratasy ho ampiasaina ary inona no tokony mangataka aho mba hizaha toetra azy ireo. Fanontaniana tsy ampy valiny. Rehefa sambo fa ny tany nahoana mahita mbola tsy nivadika perma ho pumerma fotoana. Inona no antony-po. Diva tsy tokony oktobra mahita, satria tsy misy intsony ny fananana. Hi po ma'am - tompoko, fanontaniana lang po, amin'ny bumibile dia ny tanin ny reniko sqm manao izany. ao toloza leyte po yung-tanin 'ny reny, izaho fanontaniana po ohatrinona po toy izany isika mabebenta yung-tanin' ny reniko. Tsara ny andro, Andriamatoa ny drafitra dia I buy amin ny tany, fa lova fotsiny io, ary be dia be mihoatra naipapangalan ny mpandova. Fa nizara azy - ny anjara ry rahalahy sy anabavy. Ho mora ny dingana pagpapatitulo na ny famindrana ny farany manodidina be kokoa natao ho mpividy ny tany. Miaraka amin ny tany aho nivarotra fa anaram-boninahitra, toradroa. m ny tontalin'ny, qang bnili fotsiny aho efa ho dimanjato sy sq.
m, manana asa ny fivarotana, fa nka milaza fa ny famarotana ny tany izay tsy maintsy zaraina izay po gagwin ho mpatransfer aho anaram-boninahitra miarahaba po izaho mikasa hanao buy ny tany ny kumpare aho amin ny tany dia simba mbola s anaram-boninahitra iraikambinifolo amin'izy ireo rahalahy sy rahavavy eto dia tsy mbola antsasaky s izany fa izy ireo no anarany, fa amin'ny antsasaky sy tapany izay izy ireo tsirairay toradroa.
metatra f order aho s kumpare aho sq.
tora-droa miaraka amin'ny mpiara-miasa aho f iray hoditra ny fomba bah izaho dia tokony hanao izany aho tsy voafitaka ary inona no bah ny dingana mila noho ny Drafitra, dia afaka mividy tany fa EPEB maro vao afaka ny iprovide nung mpivarotra, miresaka pa manta po kasi ny tompony teo aloha.
afaka manoro hevitra ianao, azafady izay tokony hatao. Misaotra Nividy aho tany amin'ny fizarana.
Ary izay no fomba fanaraha-maso
Ianao no nanome ahy ny k. Koa eo anoloan'ny an-tsaina aho, ary tsy izaho no ho foana.
Efa sitrana dia ny vola aho, ary inona no dingana.
Tsara ny andro-po. Nanao fotsiny aho fanontaniana ny fikasana dia mividy tany hoy ianao, asa ny fivarotana fotsiny aho nanao hoe: afaka manome anao. Satria manta po yung title ny tany dia atao hoe maty nivarotra manta afaka tena tany amin'ny lovany. Tsy misy sambo dia mizara noho izany tany inona no tsara manao izany. Misaotra noho ny valin.
Nividy tany any amin'ny banky, nagdown po muna aq.
sivy amby telopolo isan-jato ho sqm. rehefa, sy ny ntpos q po byaran ung ny sisa amin'ity taona, ka nafully karama q po, avy eo rehefa papatransfer q n po ahy ny anaram-boninahitra dia nandeha po aq amin'ny BIR aq din po nagbyad ny hetra, ny raharaha amin'ny sazy n dw po, fantatro fa nagrurunning n pla sazy q nung kanefa, ny mahafantatra f po kc taorian'ny papanotarized ny fihetsika fivarotana kc nafully karama aho nanitong taona. August, taona aho hanao izay panotarized. Izany dia b lga amin'ny manan-kery ny sazy. Misaotra hi tsara ny andro-po. M' - Tompoko nividy po aho aho-tany.
nasakin izay koa no asa ny fivarotana sy ny karama izaho koa manana ny rehetra ny be mandoa.
avy eo ny dingana farany dia dia handeha isika fa ny register ny asa ho an'ny dingana farany. fa araka ireo po mila po izy dia tany am-boalohany tittle ny tany izahay vidiana. avy eo dia handeha isika ho any amin'ny mpivarotra mba hahazo ny taloha tittle fa hoy dia miandry fotsiny ny ho realease. mila dia rehefa feno ny karama ny npo isika rehetra.
mila dia ao samkn ihany koa ny taloha tittle.misaotra anao po.
Ny mpivarotra dia ny tany, ny ampahany teny malagasy po ampy nya dada nya an-tsaina toradroa metatra aho for sale, arabo avy n hanampy po yung-tany tao handeha pa teny malagasy yung ho an'ny dingana mapalipat azy, tamin'ny lahateny n ihany koa izahay magdadown nanao aho dia ny mandanjalanja ny hofany noho ny efa-bolana, dia niresaka teny malagasy po inona no ao an-barangay. Izaho mikasa hanao ny fandoavam-bola feno n magpapagawa aho ny amin'ny tena atao ny fivarotana, ny zavatra dia toy izany koa ny dingana ho an'ny mapatituluhan aho kaperasong tany n amidy aho, hoy kc ny mpivarotra pagnarecieve n izy ireo ny tittle rehefa afaka roa taona, mbola manta aloha aho maprocess yun, marina no yun.
Ampio aho, dia marina koa fa ny tena asa ny fivarotana dia ny lany.
Misaotra anao po. Amin'ny hanontany azafady, izaho momba ny hividy ny tany amin'ny mpivarotra dia noho isika ny tany sqm aho fa ny mpivarotra tsy mbola ao ny rivotra tilte"anaram-boninahitra ny tany"tsy navoaka tanteraka karama mbola dun ny tompon-tany, ary tsy te-hanao na inona na inona, fa enjeho izy, ka dia hamidy dia mety hanao ny hafa na ho antsika. raha toa ka misy ny fiampangana fa dia vola izay azo niresaka na contrata isika dun mivarotra. ary inona no tsy maintsy isika voalohany ve isika alohan'ny aloa tena be dia be ihany koa fa tsy tena. misaotra anao be dia be. Hi Andriamatoa Mike, ho azo antoka ianao no voalohany raha toa ka misy ny olana amin ny tany toy ny: omby mortgaged any amin'ny banky. Raha toa ka misy ny Anaram-boninahitra izay, mandehana ianao, ny akaiky indrindra ny REJISITRY NY ASA ataony ao aminareo, ary magrequest ny Ceritified Marina Dika mitovy amin ny tany ie. Tsy ho hitanao ny Fanamarinana Marina ny Kopia raha toa ianao antoka (kilalaon'ny) dia ny tany.
andriamatoa, amin'ny itatanung fotsiny ny ahy, amin'ny bnebenta po kc miara-ny hofan-trano ihany trano.
k ny DP atao isam-bolana izy ho years, fa ny atao ny fivarotana lang daw po ny famantarana azy roa atao roa ny vavolombelona atao po ipapanotarized po, mihevitra ny nio no legit ny miarahaba ny namana.andriamatoa mba valio po aho ho azy ireo Mam Nada, ho azo antoka ianao voalohany ao amin'ny LOHATENY"tany. Raha tsy, hahita anao yung HETRA FANAMBARANA izy. Ny azy no alefa mangataka ko lang po, pano-po raha banky anao mba hividy vola (forclosed) mila mandoa avy hatrany amin'ny vola mialoha ny hanombohana ny fikarakarana.ary dia mandoa vola avokoa ny hahazo ny hetra. Hello po buy PO sana aho 'ny tany ianao, dia mety hiteny ny Iray amin'ireo dada raharaha be kokoa nasasad zarao amin' ny tany ny fanombanana ny vidin'ny dia, sy ny halehiben'ny no.
Oki teny malagasy po ahy na dia be kokoa po nasasub zarao tiako ny teny malagasy-po mba hahafantatra Raha toa ka ohatrinona izany.
Hello po, balak ko po kc buy trano sy tany fotsiny toy izany koa ny zo lang po cia, raha vao mino aho fa ny fomba azo antoka dia hividianana ny zo sy ny zavatra dia ny tahirin-kevitra ny hanokatra ho azo antoka fa ny anarako ho itatitle anao tany. Tsara ny andro-po. Fanontaniana fotsiny aho fanontaniana raha toa ka inona no pong tokony hanao sy mangataka ho taratasy raha ny bibilihing tany dia ny fananana ny umaong neny fa lafo dia ny ankizy. Antenaina fa hanampy ahy, noho izany dia ny voalohany tany izay bibilihin ko.
Inona no Faritra ao Filipina. Luzon, Visayas, Mindanao